Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Pochettino, Salah, Lacazette, Pedri, Iyo Sanches
HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa Kala iibsiga Maanta: Pochettino, Salah, Lacazette, Pedri, iyo Sanches
November 23, 2021 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Ciyaartoyda Paris St-Germain ayaa aaminsan in tababare Mauricio Pochettino uu u tagi doono Manchester United , waxaana ay filayaan in tababaraha reer France ee Zinedine Zidane uu bedeli doono. (Marca)
Manchester United ayaa ku qasbanaan doonta inay bixiso 10m euros (£8.4m) hadii ay rabaan inay ku abaalmariyaan Macalinka reer Argentine Pochettino, oo 49 jir ah,. (Mirror)
PSG ayaa la xiriirtay Zidane oo 49 jir ah kaas oo doonaya in uu qabto shaqada tababarenimo hadii uu Pochettino tago. (ESPN)
Tababaraha Sevilla Julen Lopetegui oo 55 jir ah ayaa wax aan macquul ahayn ku tilmaamay wararka xanta ah ee la xiriirinayo Manchester United . (Mirror)
Guddoomiye ku xigeenka fulinta Manchester United Ed Woodward ayaa ka fiirsanaya inuu dib u dhigo bixitaankiisa Old Trafford si uu gacan uga geysto helitaanka bedelka Ole Gunnar Solskjaer. 50-sano jirkaan ayaa lagu wadaa inuu ka tago doorkiisa kooxda dhamaadka sanadkan. (Sky Sports)
Tababarihii hore ee Newcastle United Steve Bruce ayaa la sheegay inuu aad u jecel yahay inuu qabto xilka tababarenimo ee waqtiga gaaban ee Manchester United . 60 jirka reer England ayaa in ka badan 300 oo kulan u saftay Man United isaga oo ciyaaryahan ah. (The Athletic)
Weeraryahanka Liverpool Mo Salah ayaa ku dhow inuu u saxiixo qandaraas cusub oo waqti dheer ah kooxda Liverpool. 29-jirka reer Masar ayaa gali doona sanadka ugu dambeeya ee qandaraaskiisa xagaaga soo aadan, iyadoo kooxdu ay dooneyso inay dhameystirto heshiiska. (Teamtalk)
Arsenal ayaan heshiis cusub kala xaajoon doonin 30 jirka reer France ee Alexandre Lacazette ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan inkasta oo ay ogyihiin in ay halis ugu jiraan in ay si bilaash ah ku waayi karaan xagaaga. Atletico Madrid , AC Milan , Marseille iyo Newcastle ayaa dhamaantood xiiseynaya weeraryahanka. (Thesun)
Chelsea ayaa kalsooni ku qabta in ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Mason Mount uu qandaraas cusub oo waqti dheer ah u saxiixi doono kooxda. 22-sano jirkaan ayaa lala xiriirinayaa kooxaha Manchester City iyo Real Madrid. (FootballInsider)
Bayern Munich ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato 18-jirka Barcelona u ciyaara Pedri, inkastoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Isbaanishka lagu burburin karo 1 bilyan euro heshiiskiosa. (AS)
West Ham ayaa ka shaqaynaysa heshiis ay kula soo saxiixanayso weeraryahanka Sparta Prague iyo Czech Republic Adam Hlozek, oo 19 jir ah (footballInsider).
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lille Renato Sanches ayaa sheegay inuu “diyaar u yahay” inuu kooxda uga tago tartan cusub. Arsenal iyo AC Milan ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya 24-jirka reer Portugal, kaasoo xagaagii ku dhawaa inuu u saxiixo Barcelona . (L’Equipe)
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa doonaya in uu heshiis cusub u saxiixo xiddiga reer Germany ee Antonio Rudiger oo 28 jir iyo Andreas Christensen oo 25 jir ah,sidoo kale Thiago Silva oo 37 jir ah iyo Cesar Azpilicueta oo 32 jir ah. Dhammaan afarta daafac ayaa qandaraaskoodu dhacayaa xagaaga. (Goal)
Barcelona ayaa laga yaabaa inay joojiso heshiiska Samuel Umtiti. Daafaca reer France oo 28 jir ah ayaa ku guul daraystay in uu ogolaado in la dhimo mushaharkiisa 208,000 oo Gini todobaadkii iyada oo ay kooxda ku jirto dhibaato dhaqaale. (Sport)
Bayern Munich ayaa qarka u saaran inay qandaraas cusub u soo bandhigto daafaca Jarmalka Niklas Sule, taasoo meesha ka saareysa rajadii kooxaha Premier League ugu sareysa ee qorsheynayay inay beeca xorta ah kula soo wareegaan 26 jirkaan. (TZ)
Arsenal ayaa xiiseyneysa weeraryahanka Romania Ianis Stoica. 18-sano jirku wuxuu hadda u ciyaaraa FCSB ee Romania ee La Liga I. (Sun)